အိမ်ဝေးသူ: ကျွန်တော့် စိတ်ကူးလက်တွဲဖော်
မေမေကကျွန်တော်ကို .. အကြီးဆုံးသား အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်…ဒါကြောင့် ..ကျွန်တော့် အတွက် ပထမဆုံး ၀န်းကျင်က .. ဖေဖေမေမေ ပေါ့ ..ဒီလိုနဲ့ ဖြစ်သန်းလာ လိုက်တာ … ကျွန်တော်
တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာပေမဲ့ .. မိသားစုလေး ကလွဲရင် ..ကျွန်တော် ၀န်းကျင်သည် အတည်မရှိပဲ ပြောင်းလဲ ရှင်သန်နေကြတယ်လေ ..
ကျွန်တော် တို့ နဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တွေ ဆိုတာ မရှိသလောက် နည်းပါးကြတယ်လေ … ရှင်သန်ရာ အလုပ်တစ်ခုကိုအပြီး မရွေးချယ်နိုင်သရွှေ့ပေါ့ … အဲဒီနောက်မှာ .. ကျွန်တော့်တို့ အတွက်အရေးအကြီးဆုံး ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲရှင်သန် သွားမယ့် လူ ကို ရွေးချယ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ .. စိတ်ကူးလေးတွေ နဲ့အနာဂတ်ကိုရင်ခုန်မျှော်လင့်ဖူးမှာပါ...
လူသားရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာ .. ကျွန်တော်တို့ အတွက် ရှင်သန်ရာမှမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ
တွေရှိကြတယ်လေ .. ဒါမှသာကျွန်တော့်တို့တွေ ရုန်းကန် ရှင်သန်မှုတွေဟာ အဓိပ္ပာယ်ရှိလာ မှာပေါ့ ..
အဲဒီ ရှင်သန်မှုတွေကို ဝေမျှခံစား ဖို့အတွက် … မျှော်လင့်ချက်တွေ မီးညှိဖို့အတွက် ..လက်တွဲဖော်ဆိုတာ လိုအပ်လာပါတယ်…...
လူသားအားလုံးဟာ မိမိရဲ့လက်တွဲဖော်တွေကို စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာ အရည်အချင်းလေးတွေ စံသတ်မှတ်ချက်လေးတွေ ပုံဖော်လာလေ့ရှိကြပါတယ် ပညာအရည်အချင်း၊ရုပ်ရည်၊ငွေရေးကြေးရေး၊ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၊ပတ်ဝန်းကျင် ၀င်ဆန့်မှု စသည့်ဖြင့်ပေါ့…….
အတတ်ပညာ ….. …ထိုက်သင့်တဲ့ အတတ်ပညာတော့ရှိရမယ်လေ .. အဓိက ကတော့ သူ့
အတတ်ပညာပေါ် သူ ဂုဏ်ယူနိုင် ရမယ် …နောက် …ကျွန်တော့်လက်တွဲဖော်ကို ရင့်ကျက် စေချင်ပါတယ်
အသိပညာ ……………. အသိပညာကတော့ ဘ၀ကျောင်းမှာ သင်ယူမကုန်နိုင်ဘူးလေ .. လူသားတွေရဲ့
စိတ်တွေကို အမြဲတမ်း နားလည်နိုင်သူ အဖြစ်တည်ရှိစေချင်တယ် .. အခြေနေမှန်ကို သုံးသပ်နိုင်သူပေါ့ …
မေတ္တာ ………………….. မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့် သူမှာ မေတ္တာတရားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားတွေထက် ပိုများသင့်တယ်ထင်တယ်လေ .. မေတ္တာတရားက စိတ်တစ်ခုလုံးကို အေးချမ်းစေတယ်လေ …
အချစ် ………………….. ချစ်ခြင်းဆိုတာ လုပ်ယူလို့မရဘူးလို့ ခံယူထားတယ်..နောက်အချစ်ဆိုတာ
ခဏခဏမွေးဖွားလို့ရသောအရာမဟုတ်ပါ ….လူတစ်ယောက်ဆီမှာ ချစ်ခြင်းကတော့ တစ်ခုပဲရှိတယ်လို့
ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ် .. ချစ်ခြင်းနဲ့ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ထပ်တူညီချင်မှညီမယ်..
အချစ်ဆိုတာ အတင်းလုပ်ယူလို့ မရတဲ့အတွက် .. လက်ထပ်ခြင်းမှာ မေတ္တာတရားကိုပဲမျှော်လင့်ထားပါတယ် .ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့လက်ထပ်ခြင်းဟာ…ထပ်တူကြခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ..အဲဒီလူအတွက် ..ပျော်ရွင်မှုကတော့ ဖေါ်ပြဖို့ စကားလုံး ရှိမယ်မထင်ပါ…ကျွန်တော် အတွက်ကတော့ မေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့လက်တွဲဖေါ်ကိုပဲ ….မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ရုပ်ရည်....................ချစ်ဖို့ကအဓိကပါ ...ချစ်တယ်ဆိုရင်...... ကိုယ့်ချစ်သူဟာကိုယ့်အတွက် အလှဆုံးလို့ လို့ထင်တယ်လေ....
စိတ်ဓါတ်.................ကျွန်တော် မျှော်လင့်သော လက်တွဲဖေါ်ဟာ ကျွန်တော့် စိတ်ကို
အနီးကပ်ဆုံး တည်ရှိနားလည်နိုင်ရမယ် ဒါမှသာ .. နှစ်ကိုယ်ဖြစ်ပေမယ့် .. စိတ်က တစ်ခုတည်းဖြစ်မှာလေ ..
ကျွန်တော် ခံယူထားတာက ရုပ်ဝတ္တုကရပ်တည်နေပေမယ့် အဓိက ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်အားကတော့ စိတ်ပဲလေ .. စိတ်ကို အသိပညာနဲ့ရှင်သန်စေရမယ် …လူမှုဆက်ဆံရေး … ကျွန်တော့ရဲ့ ၀န်းကျင်တည်ဆောက်မှုကို နားလည်ပြီး လိုက်လျောညီထွေစွာနဲ့ ၀င်ဆန့်ပြီး အကြံဥာဏ်ပေး ကူညီသူ ဖြစ်စေချင်တယ် .
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု … ဘာသာတရား တူညီရမယ် .
လေးစားမှု(အထင်ကြီးမှု )…. ……မိန်းကလေး တွေက ယောင်္ကျားလေး ကို သူတို့ဦးဆောင်သူအဖြစ် အားကိုးချင်တာလေ
အဲဒီအတွက် ယောင်္ကျားလေးမှာ လေးစားစရာ ( အားကိုးစေနိုင်သော )အရည်အချင်းတစ်ခုတော့ ရှိရမယ် .. မိန်းကလေး အများစုဟာ.. အထင်ကြီးခြင်းကနေ သူတို့ချစ်ခြင်းက မွေးဖွားတတ်ကြပါတယ် .. သူတို့ အသိပညာအလိုက်
အထင်ကြီးတဲ့အရာတွေ ကွာခြားနိုင်ပါတယ် …တချို့က ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တချို့က အသိပညာ၊ရာထူးဂုဏ်ရှိန်တွေပေါ် အခြေခံသလို တချို့တချို့ ကတော့ …စိတ်ဓါတ်အတွေးခေါ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးအထင်ကြီးလေးစားမှုတွေ.ကွာခြားတတ်ကြပါတယ်
အထင်ကြီးမှုကုန်ဆုံးလာတဲ့အခါ အချစ်ဆိုတာလဲပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လေ….အဲဒါကြောင့် ..အပြန်အလှန်လေးစား အထင်ကြီးမှုဟာလည်း မလွဲမသွေ လိုအပ်တဲ့ အချက်တခုပါပဲ…..
နားလည်မှု………. နောက်တစ်ခုက .. အဲဒီ မိန်းကလေး က ကျွန်တော့် အရည်အချင်း ကို
အနီးစပ်ဆုံးနားလည်ပြီး ကျွန်တော့် အရည်အချင်းကို တောက်ပစွာ လင်းလက်အောင်
ကူညီနိုင်သော မိန်းကလေးမျိုး နဲ့ တွေ့ ဆုံချင်ပါတယ် ….တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန်လေးစား .. ကြင်နာမှုမေတ္တာတရား ……နားလည်မှုနဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်ဘ၀ရဲ့အချိန်များကို
သူမနဲ့အတူ ကျော်ဖြတ်ချင်ပါတယ် ….
ကဲ…..ကျွန်တော့် စိတ်ကူးလေး ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား………………
ကျွန်တော့်လက်တွဲဖော်ကို သိချင်နေတဲ့ ..ညီမလေးဆုဝေလဲ ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်.............
Posted by အိမ်ဝေးသူ at Wednesday, February 13, 2008